Mogadishu Journal » 2017 » December » 4
Mjournal :-Warbaahinta kooxda Xuutiyiinta Dalka Yemen ayaa goor-dhaw baahiyay in la dilay Madaxweynihii hore ee Dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax. Idaacad ay maamulaan Kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa waxaa ka hadlay Wasiirka Arimaha Gudaha ee Xuutiyiinta waxa uuna sheegay in la...
Mjournal :-Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa maanta ayaa meel mariyay xubin ka mid noqon doonta Gudiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Golaha Shacabka ayaa cod aqlabiyadleh ku ansixiyay xubinnimada Muumino Shiekh Cumar, oo noqoneysa Xubin ka mid...
Mjournal :-Wararka inaga soo gaaraya xarunta Villa Baydhabo ee ciidanka Xoogga dalka Somaliyed, ayaa sheegaya in goor dhaw halkaasi uu ka dhex dhacay qarax. Qaraxan ayaa wuxuu ahaa mid lagu soo xiray gaari uu leeyahay Sarkaal ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, kaasi...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhow si rasmi ah u furay Shirka Amniga Qaranka oo ay ka qeyb galayaan Madaxda Maamul Goboleedyada, Wakiilo, Safiiro ka socda Beesha Caalamka, Saraakiil ciidan oo ka tirsan Midowga Yurub iyo Mareykanka. Shirkan...
Kulamo Amniga looga hadlayo oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho
Mjournal :-Shir heer sare ah oo Amniga Qaranka looga hadlayo ayaa maanta ka furmaya Xarunta Xalane oo xarumo iyo Talis u ah howl galka AMISOM iyo Safaaradaha reer galbeedka, iyadoo shirkan ay ka qeyb galayaan xubno sar sare ah oo caalami ah sida uu sheegay Wasiirka Warfaafinta...